Nkpari elu: Nchapu Web Site na Mma Oke
Taa, e nwere ọtụtụ ụzọ ndị mmadụ nwere ike isi wepu data site na ibe weebụ. Ọtụtụ weebụsaịtị, dịka Google na Facebook, na-enye API nke ndị na-enyocha weebụ nwere ike iji nweta ohere niile gbasara ozi ha chọrọ. Mana ọ bụghị akwụkwọ weebụ niile ejiri ngwa API, n'ihi na ha nwere ike ọ gaghị achọ ka ndị na-agụ akwụkwọ ha kpokọta ụdị ozi ọ bụla ma ọ bụ n'ihi na ha adịghị eji nkà na ụzụ dị elu. Ma gịnị ka scrapers web na-eme n'ụdị ikpe ndị a? Kedu ka ha ga - esi wepu data ma ọ bụrụ na ibe weebụ anaghị eji API? Eziokwu bụ na ha nwere ike n'ezie na-ekpochapụ weebụsaịtị na ọtụtụ ụzọ.
Jiri akwụkwọ Google maka Nsonaazụ Ọma
Site n'iji akwụkwọ Google, ha nwere ike ịchọta ihe niile ha chọrọ. Ha nwere ike itinye ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ asụsụ ọ bụla mmemme, dị ka Eke Ọgba. Python bụ asụsụ dị ike nke mmemme, nke dị mfe iji ma mee ka ndị mmemme jikọọ ọrụ ha na ụwa. Ọ na-enye ndị ọrụ ya ohere igosipụta echiche dịgasị iche iche na ole na ole ederede nke asụsụ ndị ọzọ, dị ka Java.
Ebere Egwu (Eke Ọgba Eke Ọgba): Otu Ngwá Ọrụ Dị Njikere maka Ndenye Ndenye
Ọbá akwụkwọ Python na-enye ohere ngbanwe ngwa ngwa na ọrụ ntanetị weebụ na ọ na-enye ọtụtụ ọbá akwụkwọ iji mee ụfọdụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, BeautifulSoup bụ ngwa dị mfe iji rụọ ọrụ ngwa ngwa, dị ka ịpịpụta data dịgasị iche iche, dị ka nchịkọta, kọntaktị, tebụl na ndị ọzọ. N'ezie, BeautifulSoup na-enye ndị ọrụ ya ụzọ dị mfe ma dị irè iji kpogharịa, chọọ ma gbanwee ụfọdụ data. Maka, ọmụmaatụ, ọ na-ewe ihe ederede HTML, ọ na-agbanye ya, site na ịmepụta ihe kwekọrọ na nchekwa. Ọzọkwa, ọ na-agbanwe na-akpaghị aka ọ bụla akwụkwọ na-abata na Unicode, n'ihi ya, ndị ọrụ adịghị na-eche banyere endings.
Atụmatụ nke Mara Mma Ofe
Ndị ọrụ nwere ike ịwụnye ngwá ọrụ a dị irè na usoro Windows na Linux. Mgbe ahụ, ha nwere ike ịnyagharịa ma mụta otu esi eji usoro ahụ eme ihe. Ha nwere ike ịhụ ihe atụ niile dị mkpa iji nweta echiche nke otu ha ga-eji usoro a. Ihe atụ ndị a nwere ike inyere ha aka ịghọta usoro ahụ ka mma. Ọ bụ ihe nduzi bara uru maka ịmatakwu otu esi enwe ike iwepu data site na ibe weebụ.
Ọ na - eme ka data dị ka akwụkwọ mbụ. Mana na ikpe na enwere ụfọdụ njehie na otu akwụkwọ, Ebe dị mma na-echepụta ha ma nye ndị ọrụ ya usoro dị mma.Ata ocha na-enye ụfọdụ nnukwu ihe onwunwe, nke na-enye HTML aha aha, iji mee ka ha dị nnọọ mfe maka ọrụ. Dị ka ihe atụ, ndị ntanetị weebụ kwesịrị icheta, dịka ọmụmaatụ, na otu mmewere nwere ike ịnweta ọtụtụ ụdị klas na otu klas nwere ike kewaa n'ime ihe. Nke ọ bụla n'ime ihe ndị a nwere ike inwe naanị otu id, nke nwere ike iji na ibe naanị otu ugboro. Nri Ogwu bu ihe omume di ukwu, nke edeputara nke oma maka oru di iche iche dika ntaneti web. Ọ na-enye ụfọdụ ụzọ dị mfe maka ndị ọrụ ya iji gbanwee osisi parse. A na-emepụta usoro asụsụ a n'elu akụkụ kachasị mma nke Eke Ọgba, dịka LXML ma ọ bụ nnọọ mgbanwe. N'eziokwu, ọ na-achọta data ekpochi ma chịkọta ozi niile dị mkpa maka scrapers web n'ime nkeji Source .